.မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးခွဲထားရတဲ့သူ့ကို ချစ်ဇနီးလေးက အသေးစိတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလို့ ပီတိဖြာကာကျေနပ်နေရတဲ့ ချစ်ကောင်း. – Askstyle
.မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးခွဲထားရတဲ့သူ့ကို ချစ်ဇနီးလေးက အသေးစိတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလို့ ပီတိဖြာကာကျေနပ်နေရတဲ့ ချစ်ကောင်း.
မ်က္လုံးႏွစ္ဖက္လုံးခြဲထားရတဲ့သူ႕ကို ခ်စ္ဇနီးေလးက အေသးစိတ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလို႔ ပီတိျဖာကာေက်နပ္ေနရတဲ့ ခ်စ္ေကာင္း
တစ္ေခတ္တစ္ခါကတည္းကေန ယေန႕အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အဆိုေတာ္ခ်စ္ေကာင္းကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ဝါရင့္ေတးသံရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ေကာင္းရဲ႕သီခ်င္းေဟာင္းေလးေတြကလည္း အခုေခတ္လူငယ္ေတြႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရေလာက္တဲ့အထိ ေရပန္းစားေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ေကာင္းက အိမ့္ခ်စ္နဲ႕ဂ်ဴနီယာခ်စ္ေကာင္းတို႔ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း အႏုပညာအေမြေတြလက္ဆင့္ကမ္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္ေကာင္းက အခုခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္မိသားစုဘဝေလးနဲ႕ သာယာေအးခ်မ္းေနၿပီး ကေလးေတြနဲ႕အတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ေနထိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ေကာင္းရဲ႕မိသားစုဘဝေလးက ေႏြးေႏြးေထြးေထြးနဲ႕ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္ရွိတဲ့မိသားစုေလးျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္ေကာင္းကေတာ့ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္၊ဝတၱရားေတြကို မပ်က္ကြက္ဘဲ ခ်စ္ဇနီးနဲ႕ကေလးေတြကို လိုေလေသးမရွိေအာင္ထားေပးကာ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာအမွတ္တရေတြကိုသာ ဖန္တီးေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
လတ္တေလာမွာဆိုရင္ေတာ့ ခ်စ္ေကာင္းက မ်က္လုံးႏွစ္ဖက္စလုံးကို ခြဲစိတ္ထားတာေၾကာင့္ အရမ္းဂ႐ုစိုက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ခ်စ္ဇနီးေလးက အိမ္ထဲမွာေနရင္းနဲ႕လည္း ေနကာမ်က္မွန္ကိုတပ္ထားတဲ့ခင္ပြန္းကို စေနာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္ေကာင္းကလည္း မ်က္လုံးႏွစ္ဖက္လုံး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္ရလို႔ အရမ္းေပ်ာ္႐ႊင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ခ်စ္ေကာင္းကေတာ့ ဇနီးေကာင္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားရလို႔ က်န္းက်န္းမာမာနဲ႕ အၿမဲေပ်ာ္႐ႊင္ေနတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးခွဲထားရတဲ့သူ့ကို ချစ်ဇနီးလေးက အသေးစိတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလို့ ပီတိဖြာကာကျေနပ်နေရတဲ့ ချစ်ကောင်း
တစ်ခေတ်တစ်ခါကတည်းကနေ ယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အဆိုတော်ချစ်ကောင်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဝါရင့်တေးသံရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ကောင်းရဲ့သီချင်းဟောင်းလေးတွေကလည်း အခုခေတ်လူငယ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ရလောက်တဲ့အထိ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ကောင်းက အိမ့်ချစ်နဲ့ဂျူနီယာချစ်ကောင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုလည်း အနုပညာအမွေတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ချစ်ကောင်းက အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝလေးနဲ့ သာယာအေးချမ်းနေပြီး ကလေးတွေနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ကောင်းရဲ့မိသားစုဘဝလေးက နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်ရှိတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။
ချစ်ကောင်းကတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်၊ဝတ္တရားတွေကို မပျက်ကွက်ဘဲ ချစ်ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကို လိုလေသေးမရှိအောင်ထားပေးကာ ပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရတွေကိုသာ ဖန်တီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ ချစ်ကောင်းက မျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကို ခွဲစိတ်ထားတာကြောင့် အရမ်းဂရုစိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ကောင်းရဲ့ချစ်ဇနီးလေးက အိမ်ထဲမှာနေရင်းနဲ့လည်း နေကာမျက်မှန်ကိုတပ်ထားတဲ့ခင်ပွန်းကို စနောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ကောင်းကလည်း မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံး ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်ရလို့ အရမ်းပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ကောင်းကတော့ ဇနီးကောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။